Dacwad ka dhanka ah Faysal Cali Waraabe oo xeer ilaalinta Somaliland loo gudbiyey - Caasimada Online
Home Somaliland Dacwad ka dhanka ah Faysal Cali Waraabe oo xeer ilaalinta Somaliland loo...
Dacwad ka dhanka ah Faysal Cali Waraabe oo xeer ilaalinta Somaliland loo gudbiyey
Hargeysa (Caasimada Online) – Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta dacwad loo heysto guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID, Mudane Faysal Cali Waraabe u gudbiyey xeer ilaalinta guud ee maamulkaasi.
Dacwadda oo ah mid culus ayaa timid, kadib makii shalay guddiga joogta ah ee golaha wakiilada Somaliland ay kalsoonidii kala noqdeen guddoomiye Faysal Cali Waraabe.
Cabdraxmaan Mowliid oo ka mid ah Garyaqaanada dhanka sharci ee golaha wakiiladda maamulka Somaliland oo goor dhow warbaahinta ugu warramay gudaha magaalada Hargeysa ayaa shaaciyey in dacwaddaasi ay u gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta, islamarkaana ay rajeynayaan in la dhageysan doono maalmaha soo socdo.
Eedeymaha waa weyn ee loo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah inuu jebiyay Dastuurka Somaliland, isla markaana uu halis ku yahay nabadda iyo midnimada Somaliland.
Sidoo kale waxaa loo heystaa inuu abuuray kicin dadweyne iyo iska horkeenida bulshada Somaliland.
Dhankiisa Faysal Cali Waraabe ayaa shalay eedeymahaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan, isagoona ku dooday inuusan jabin qodob Dastuuri ah.
Faysal oo hoggaamiyo xisbiga UCID ayaa innta badan warbaahinta mariya hadallo aan loo meel-dayin, kuwaasi oo madaxda Somaliland qaarkood ay rumeysan-yihiin inay abuuri karaan khatar amni iyo tafaraaruqa bulshada dhammaan reer Somaliland.